Mampiato ny sidina rehetra i Adria Airways any Slovenia: inona ny manaraka?
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Mampiato ny sidina rehetra i Adria Airways any Slovenia: inona ny manaraka?
Manaraka an'i Thomas Cook i Adria Airways ary nampiato ny sidina rehetra androany. Condor Alemanina mety ho manaraka.
Nilaza i Adria Airways avy any Slovenia fa hampiato ny sidina rehetra amin'ny talata sy alarobia noho ny "fidirana an-tsokosoko amin'ny vola vaovao ilain'ny kaompaniam-pitaterana an-tsokosoko amin'ny sidina bebe kokoa".
Ny foiben'ny orinasa Adria dia eo amin'ny tokotanin'ny seranam-piaramanidina Ljubljana ao Zgornji Brnik, Cerklje na Gorenjskem, Slovenia, akaikin'i Ljubljana.
"Ny orinasa amin'izao fotoana izao dia mitady vahaolana amin'ny fiaraha-miasa amin'ny mpampiasa vola mety hitranga. Ny tanjon'ny tsirairay voakasik'izany dia ny hampiala ny Adria Airways indray, "hoy ny fanambarana nataony ny alatsinainy teo.
Nivarotra an'i Adria tamin'ny tahiry famatsiam-bola alemana 4K Investore i Slovenia tamin'ny 2016. Nanomboka teo dia nivarotra ny fiaramanidiny rehetra ilay orinasa ary nampiasa fiaramanidina nampanofaina mba hankanesany any amin'ny toerana eropeana maromaro.
Tamin'ny volana martsa 2016, ny 4K Invest, tahiry famerenana amin'ny laoniny any Luxembourg, dia nahazo ny 96% ny anjaran'ny Adria Airways avy amin'ny fanjakana Slovene. Ny tompona vaovao dia nanendry an'i Arno Schuster ho CEO an'ny Adria.
Tamin'ny 1 Jolay 2017, nampiato ny toerany i Adria ao amin'ny tanànan'i Łódź Poloney, izay nitondrany sidina niaraka tamin'ny fiaramanidina CRJ700 niorina, nisoratra anarana tamin'ny S5-AAZ, tao anatin'ny telo taona lasa. Nandritra io fotoana io dia nanokatra toby roa hafa koa i Adria any Polonina, ny iray any Rzeszów ary ny iray any Olsztyn; na izany aza, samy nifarana haingana dia haingana izy roa ireo. Adria izao dia vonona hifantoka bebe kokoa amin'ny ivon-toerany lehibe ao amin'ny seranam-piaramanidina Ljubljana, izay efa nahita fiakaran'ny zotram-sidina mankamin'ny toerana roa natolotry ny Adria. Ireto toerana itodiana ireto dia ao Amsterdam, Podgorica, Pristina, Sarajevo ary Skopje.
Tamin'ny 20 Jolay 2017, nanambara i Adria fa mividy Darwin Airline, izay miasa ho sidina Etihad Regional ary an'ny Etihad Airways no tompony. Ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka dia hivarotra ny tenany ho Adria Airways Switzerland, fa hanohy ny asany amin'ny maha Darwin Airline miaraka amin'ny taratasy fanamarinana (AOC) efa misy an'ny air operator. Adriana no tompon'andraikitra amin'ny varotra sy ny asa sasany amin'ny fitantanana sy ny asa. Saingy, amin'izao fotoana izao, tsy hisy fiatraikany mivantana amin'ny asan'ny zotram-piaramanidina manontolo, satria ny toby roa dia hijanona ao Genève sy Lugano.
Tamin'ny volana septambra 2017 dia naseho fa nivarotra ny marika 8 tapitrisa Euros tamin'ny mpividy tsy fantatra i Adria tamin'ny volana desambra tamin'ny taona lasa.
Tamin'ny volana novambra 2017, nanambara sidina vaovao avy any an-tanànan'i Bern of Bern, i Adria, izay vokatry ny SkyWork Airlines, izay mpandraharaha lehibe indrindra teo amin'ny seranam-piaramanidina Belp, very ny AOC. Ny sidina mankany Berlin, Hamburg, Munich ary Wina dia natomboka ny 6 novambra 2017 ary tokony hampiasain'ny kaomisaria Adria Airways Switzerland, na izany aza, dia nofoanana ireo drafitra ireo andro vitsivitsy monja taorian'ny fanambarana, satria nahavita namerina ny asany ny SkyWork AOC.
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, nifantoka tamin'ny sidina ad hoc i Adria, izay miasa ho an'ny orinasa mpamokatra fiara lehibe indrindra, toa an'i Ford, Chrysler ary Ferrari.
Tamin'ny 12 Desambra 2017, Darwin Airline, zanaky ny Swiss any Adria, izay miasa toy ny Adria Airways Switzerland, nambara fa bankirompitra ary nofoanana ny AOC. Namarana ny asa rehetra ny zotram-pitaterana an'habakabaka.
Tamin'ny volana Janoary 2019, nanambara i Adria Airways fa hanidy ny fijanonany tanàna fohy mifototra ao amin'ny seranam-piaramanidina Paderborn Lippstadt any Alemana izay misy zotra telo mankany London (izay efa nijanona tamin'ny faran'ny taona 2018), Vienna ary Zürich. Mandritra izany fotoana izany dia navoaka ny fanapahana lehibe mankany amin'ny tamba-jotra misy ny zotram-piaramanidina ao Ljubljana miaraka amin'ny serivisy rehetra mankany Brač, Bucharest, Dubrovnik, Düsseldorf, Geneva, Hamburg, Kiev, Moskoa ary Warsaw.
Ny toekarena afrikanina dia mitarika ny fitomboan'ny fizahantany
Ny Moja Tuu sy Hakuna Majiwe dia manana orinasam-pitantanana vaovao